Fanabeazana alika tsy misy sazy | Tontolo alika
Fanabeazana alika tsy misy sazy
Rehefa mampiofana alika dia misy fomba maro fetra fetra ary hanazava mazava izay fihetsika tsy ekena. Saingy ny sazy sasany, toy ny fanidiana azy ireo irery, dia tsy maintsy ialana. Manamarina an'io toerana io izahay avy eo fomba hafa mahomby sy azo antoka kokoa avy amin'ny fomba fijery psikolojika.
alika sosialy izaitsizy tokoa izy ireoIzany no antony tsy itiavan'izy ireo irery. Mandra-pahatongan'izany, tsara daholo. Raha tian'izy ireo izany, ny famelana azy ireo ho sazy dia tsy sazy akory ary ny olana dia izany ilay alika dia mifandray irery amin'ny zavatra tsy mety ataony ary isaky ny mila mijanona irery ianao dia hahatsapa ho ratsy kokoa. Manoro hevitra foana izahay ny hanao ny mifanohitra amin'izany, izany hoe, mampifandray ny zava-misy hijanona amin'ny zavatra tsara ihany, amin'izany fomba izany, ny tsy fahatongavantsika dia hiatrika fitoniana bebe kokoa amin'ny alika ary hiteraka fijaliana kely kokoa ho azy, izay hiafara amin'ny fahafahan'ny miteraka fanahiana na faneriterena misaraka, toy ny milelaka ny paw tsy an-kijanona.
1 Sazy sa valisoa?
2 Aza mananatra azy raha tsy ilaina izany
Sazy sa valisoa?
Alao an-tsaina io seho io miresaka momba ny mpitsidika ny tompony ary mivovo ny alika mba hisarika ny saina. Tapa-kevitra ny hanasazy ny alika, ny tompony dia manatona azy, misambotra azy na manome baiko ary miaraka aminy any amin'ny toerana misy ny sazy.
El ivon'ny fiheverana, mandritra ny fotoana fohy dia ilay alika io ary ny vokany dia rehefa avy nanao izay tsy tokony hatao dia mahatsapa valisoa ilay alika. Ny sazy ho avy aorian'izay dia tsy hahomby, na dia mety tsy mahafinaritra aza. Rehefa mahavita mandositra ny alika alohan'ny hahatongavany amin'ny sazy, dia vao mainka nisarika ny sainy izy ary mahatsapa valisoa bebe kokoa noho ny fihetsika tsy mendrika.
Matetika dia miharihary rehefa mifalifaly ilay alika, tia mahita ny tompony manandrana misambotra azy. Raha azo atao ny manasazy ny alika ho toy ny zava-kanto majika, tsy mila mitondra azy ireo any amin'ny toerana misy ny sazy, dia ho mandaitra kokoa ny sazy, saingy mbola ny fiarahana manao ny tsy mety amin'ny irery.
Tadidio fa manome valisoa ny alikanao ianao isaky ny mijery azy ianao, na dia fikasana hanasazy aza izany.
Para mampiofana ny alika Ny fiaraha-miaina amin'ny olombelona dia tsy misy tsara noho ny fifandraisana lava eo amin'izy roa ary ny famerimberenana ny valisoa sy ny fananarana, miankina amin'ny asa mety na tsy mety ataon'ny alika, dia manazava ny fetra sy mampihena fihetsika tsy mendrika.
Aza mananatra azy raha tsy ilaina izany
Noho ny maha-zava-dehibe ny famerimberenana, ny teknikan'ny mitaona ny alika hivily lalana mba hananarana azy imbetsaka. Ohatra, amin'ny fampianarana azy tsy hiampita arabe, dia manandrana mamporisika azy handeha amin'ny lafiny iray isika amin'ny filalaovana baolina na zavatra hafa.
Raha misy amboa mitsambikina sy mitroka mba ho hita, ny zavatra tsara indrindra dia ny mibedy azy amin'ny fotoana marina ny fitsambikinana sy ny hodi-kazo ary isaky ny mihombo na mitsambikina indray izy dia hiteraka fanaratsiana hafa. Raha tsy misy vokany dia ahitsinay. Miaraka amin'izany rehetra izany, ny fitondran-tena ratsy lasa mazava amin'ny alika izy io ary mifandray amin'ny zavatra tsy mahafinaritra.
Raha tokony hiasa saina fotsiny manasazy ny lesoka alika, tsy maintsy miezaka hatrany isika mampianatra ireo fihetsika mety sy manome valisoa azy ireo.
Ohatra, raha mitsambikina ny alika hisarika ny sainaRaha tokony hanasazy azy dia tsara kokoa ny mampianatra azy hipetraka hanana fitiavana ary izany ny sazy, rehefa ilaina sy ilaina ny manome ny alika fiainana mahafinaritra kokoa sy akaiky ny olona, ​​dia azo ampiharina tsy mila miala ny biby irery ary tsy azo antoka.
voalohany, raha omena tsiny izy dia tsy maintsy atao izao. Omeo ny safidinao, miaraka amin'izay koa ny fihetsika tsy mety. Aleo ihany raha eo am-piandohan'ny fihetsika, toy ny rehefa manomboka manokatra ny vavany hitifitra ny alika.
Ny ady voalaza indrindra dia ilay miteraka tahotra na tsy mahazo aina amin'ny alika, tsy mandratra na mampivadi-po azy. Ilaina ny fomba fananarana ary koa ny fomba fampiharana azy ny fahombiazana dia miovaova arak'alika. Ka rehefa misy fisalasalana dia zava-dehibe ny mitady fanampiana amin'ny mpanazatra na manam-pahaizana manokana momba ny fitondran-tena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fanabeazana alika tsy misy sazy
Ahoana no hikarakarana ny volon'ny bulldog?
Ny tahotry ny alika amin'ny afomanga